Ikhamera eyamkelweyo yomzimba ayinakuba sisigqibo sokugqibela | Izisombululo ze-OMG
Umbono kukwakha ukuba yonke ikomputha ixhotywe ngekhamera yomzimba, imbambano iya kukhutshwa ngokudutyulwa kwamapolisa kunye nokunye ukusebenzisa amandla kuba "okwenzekileyo" kuya kufakwa kwividiyo ukuze babone bonke. Iikhamera zomzimba sisixhobo esandayo esifanelekileyo sokubonakala. Kodwa amasebe amapolisa kusafuneka enze okungakumbi ukuphucula ukwenziwa kwezinto elubala kunye nokuphendula.
Alithandabuzeki elokuba iikhamera zomzimba ezinjengee-dash cams, i-cams zeselfowuni, kunye ne-cams zokujonga zinokubonelela ngokwahlukileyo ngokuhlangana kwamapolisa kwaye, kwiimeko ezininzi, kunokwenzeka ukuba ancede amagosa. Kodwa njengazo zonke izixhobo, ikhamera ebekwe iyunifomu yakho okanye entlokweni yakho ineemida ekufuneka ziqondwe kwaye ziqwalaselwe xa kuvavanywa imifanekiso, bayarekhoda.
Ikhamera ayilandeli ngamehlo akho okanye ibone njengoko ibona
Ikhamera ayilandeli ngamehlo alowo uzinxibileyo njengoko isiganeko senzeka kwinqanaba langoku lokuphuhliswa, ikhamera yomzimba ayisiyi-tracker yeliso. Eso sixhobo sintsonkothileyo sinokulandela ukuhamba kwamehlo akho kunye ne-superimpose kwisangqa sevidiyo ezincinci ezibomvu ngqo apho ujonge khona ukusuka kwimicrosecond ukuya kwelinye.
Ikhamera yomzimba ifoto yendawo ebanzi kodwa ayinakubhala ukuba ngaphakathi kwendawo leyo ujonga kuyo nayiphi na indawo. Ukuba ujonge kude nalapho ujolise khona ikhamera, awunakubona isenzo ngaphakathi kwekhamera ebonakala ngathi yenzeka 'kanye phambi kwamehlo akho.' Kunokubakho unxibelelwano olukhulu phakathi kwendawo yakho yokujonga kunye neekhamera. Emva kwexesha, umntu ophonononga into ebanjwe kwikhamera kunye nokugweba isenzo sakho unokuba nengqondo eyahlukileyo yoko kwenzekileyo ngeloxesha wayesenzeka ngalo.
Isantya sekhamera sahlukile kwisantya sobomi
Kungenxa yokuba iikhamera zomzimba zirekhoda ngesantya esiphezulu kakhulu kunendawo eqhelekileyo elula yokugcina izinto okanye iikhamera zoncedo lokhuselo, kunqabile ukuba ulwazi olubalulekileyo luza kulahleka kwizithuba ze-millisecond phakathi kwezakhelo, njengoko kusenzeka ngamanye amaxesha ngezi zixhobo ze-cruder. Abantu abangayiqondiyo inkqubo yempendulo abayi kuyifaka into xa bejonga i-footage. Bacinga ukuba igosa ligcina isantya sesenzo njengoko ikhamera irekhoda. Ke, ngaphandle kolwazi olungenisiweyo, abanakuqonda ukuba igosa lingakugcina njani ngokungabinakho ukubeka umjikelo kumqolo womrhanelwa okanye ukudubula okongeziweyo emva kokuba isongelo siphelile.
Ikhamera inokubona ngcono kunokuba uyibona kukukhanya okuncinci
Ukucinga ngobuchule obuphezulu kweekhamera zomzimba kubavumela ukuba barekhode ngokucacileyo kwiindawo ezininzi ezinokukhanya okuncinci. Xa ubukroli luphononongwa emva kwexesha, kunokwenzeka ukuba babone izinto zendawo eneenkcukacha ezibukhali kunokuba ubuya kwenza ngexesha ikhamera ivulwe. Kwelinye icala, iikhamera azihlali zijongana kakuhle notshintsho lwesibane. Ukuhamba ngequbuliso ukukhanya okufiphele okanye ukukhanya, ikhamera inokuphelisa imifanekiso ngokupheleleyo.
Umzimba wakho unokuyithintela imbonakalo
Ubungakanani bomfanekiso wekhamera oxhonyi kuxhomekeka kakhulu kwindawo ebekwe kuyo kunye nalapho kwenzeke khona inyathelo. Kuxhomekeke kwindawo kunye ne-engile, umfanekiso unokuthi uvinjelwe ngamalungu akho omzimba, ukusuka kwimpumlo ukuya ezandleni zakho. Iikhamera azikwazi ukufumana umfanekiso we360degree ngemeko enokwenzeka. Le nto ayinakusinika umfanekiso wokwenyani wesiganeko. Ukuba udubula umpu okanye iTaser, umzekelo, ikhamera kwisifuba sakho ayinakho ukurekhoda ngaphezulu kweengalo nezandla ezongeziweyo. Okanye ukuthoba nje isimo sakho kunokuwenza ungabonakali umbono wekhamera. Amaxesha abuhlungu ngaphakathi kwimeko apho unokubona ukuba mhlawumbi uphoswe ngokupheleleyo ngumzimba wakho ngenxa yeendlela eziguqukayo, ekugqibeleni kufihla into enokuphinda ihlolwe ngumbuyekezi ukuze enze isigqibo esifanelekileyo.
Ikhamera kuphela irekhoda kwi-2-D
Kungenxa yokuba iikhamera azirekhodi ubunzulu bensimu inqanaba lesithathu elibonwa ngamehlo omntu ukugweba imigama ngokuchanekileyo kumgangatho wabo. Kuxhomekeke kwilensi ebandakanyekayo, iikhamera zinokucinezela umgama phakathi kwezinto okanye zenze zibonakale zisondele kakhulu kunoko zinjalo, ngaphandle komqondo ofanelekileyo womvavanyi unokulijonga gwenxa inqanaba lesongelo igosa elijonge kulo. Kukho iindlela zobugcisa zokumisela umgama kwiirekhodi ze-2-D kodwa ezi azaziwa ngokufuthi okanye zifikeleleke ngabaphandi abaninzi.
Ikhamera enye inokuthi ayanele
Iikhamera ezininzi zirekhoda umsitho, kunamathuba amaninzi okuba kucace ukungaqiniseki. I-engile, ukukhanya okuhleliyo, kunye nezinye izinto ngokuqinisekileyo kuya kwahluka kumbono wamagosa ukuya kwelinye, kwaye ukuvumelanisa i-footage phezulu kuya kubonelela ngolwazi olubanzi lokuqonda amandla wento eyenzekileyo. Into ekhangeleka ngathi ngathi iyahambelana nesenzo ukusuka kwenye ikona inokubonakala ifanelekile kwenye.
Cinga ngohlalutyo lwemidlalo kumdlalo webhola. Ukusombulula iifowuni ezisondeleyo, oosompempe bafuna ukujonga isenzo ukusuka kwiikhamera ezininzi kangangoko ukukuqonda kakuhle oko bakubonayo. Ngokufanelekileyo, amagosa afanele ukuthathelwa ingqalelo efanayo. Ingxaki kukuba amaxesha amaninzi kukho ikhamera enye kuphela ebandakanyekayo, xa kuthelekiswa neshumi elinambini elinokudityaniswa kumdlalo wezemidlalo, kwaye kwimeko leyo, ukusikelwa umda kufuneka kugcinwe kungqinile engqondweni.
Ikhamera ayinakuze ithathe indawo yophando olucokisekileyo
Xa amagosa echasa ukunxiba iikhamera, abantu ngamanye amaxesha bacinga ukuba bayoyika "ukucaca". Kodwa ngakumbi bahlala benenkxalabo yokuba ukurekhodwa kweekhamera kuya kunikwa ngokungafanelekanga, ukuba akukhethiwanga, ukugweba isenzo sabo. Ukurekhodwa kwekhamera akufuneki kuthathwe kuphela njengeNyaniso malunga nesiganeko sempikiswano. Kufuneka ilingwe kwaye ivavanywe ngokuchasene nobungqina, ubungqina, ingxelo yegosa elichaphazelekayo, kunye nezinye izinto zophando olungenachaphaza, olungenamkhethe noluthathela ingqalelo izinto zomntu. Ukushokoxeka kweekhamera zomzimba kunye nezinye kufuneka kuqondwe ngokupheleleyo kwaye kuvavanywe ukukhulisa ukusebenza kwazo kunye nokuqinisekisa ukuba azithathwa njenge 'bullet magic' ngabantu abangaziqondi ngokupheleleyo iinyani zamandla ashukumisayo.
Amagosa awavuli ikhamera
Uphononongo lweCandelo lamaPolisa laseNew Orleans lafumanisa ukuba zenzeke phantse iimeko ze100 apho amapolisa ayesebenzisa amandla kwaye enxibe iikhamera zomzimba kodwa engakhanyiswanga.
Ngo-Septemba ophelileyo, amapolisa amabini aseVermont adubula abulala umntu ngelixa enxibe iikhamera zomzimba. Akukho gosa labakhanyisela ngaphambi kokudubula. bobabini bacoceka kubo bonke ububi.
Kanye ngaphambi kokroba amazinyo ababhinqileyo ngaphandle, i-Daytona Beach, eFlorida, amagosa acima iikhamera zabo zomzimba.
NgoSeptemba, amapolisa eWashington, DC, adubula uTerrence Sterling, indoda emnyama engenabungozi ye-31, emva kokuba isithuthuthu sayo singene emotweni yabo. Kodwa ngokuchasene nomgaqo-nkqubo weSithili, akukho nalinye lamagosa asendaweni yesebe axhoma iikhamera zabo de kudlule nasemva kokudubula. Amagqabantshintshi esi sixeko akhutshiweyo athabatha ixesha lokugqibela likaSterling, kodwa ividiyo iqala ngaphezulu komzuzu emva kokudutyulwa. Ityala lisaphandwa yiOfisi yegqwetha laseMelika. Ngoku, amagosa eDC kufuneka aqinisekise ngee-dispatchers ukuba batshintshele kwiikhamera zabo zomzimba xa bephendula iifowuni okanye bethetha noluntu.
Ngubani Othengisa iTekhnoloji yeKhamera ye-Worn-Worn
Amasebe amaninzi amapolisa asebenzisa iikhamera ezinxibe umzimba ezenziwe ngu-Axon (ngaphambili owayengu-Taser), obonelela ngeekhamera zasimahla kwaye athengise iinkonzo zokugcina idatha. Abanye abathengisi baquka i-Aventura, i-Mamba eMnyama, uKhuseleko lwe-BrickHouse, i-Brimtek, i-COBAN, Idatha911, i-DEI, i-Digital Ally, i-FlyWIRE, ukugweba iGlobal Global, i-GoPro, i-HauteSpot, i-HD Protech, i-Kustom Signals, i-L-3 i-Mobile-Vision, iiNkqubo zezoMthetho, iMarantz Professional, IMartel, i-Motorola, iPanasonic, i-Patrol Eyes, i-Paul Conway, i-Pinnacle, i-PRG, i-Primal USA, i-Utility Inc., i-Pro-VISION, i-Reveal Media, i-Innovations yoKhuseleko, ukujonga umbono wokhuseleko, i-Titan, i-Use, VIEVU, i-VP360, i-WatchGuard, i-WOLFCOM, i-Zepcam, kunye neZetronix.
Ukongeza ukuthengisa iikhamera zomzimba, abanye abathengisi bakwabonelela ngokugcinwa kwedatha yonyawo. Umzekelo, abathengisi bekhamera abanxibe-yomzimba banxiba i-OMG ukunyanzeliswa komthetho banika ukugcinwa kwangaphakathi kunye nekhadi le-SD, kwaye bengumnini inkampani http://omg-solutions.com/ .
UStephon Clark, indoda yase-Afrika-yaseMelika, wabulawa ngamapolisa eSacramento kwikhaya likagogo wakhe, abantu baqhankqalazela isenzo samapolisa. Ekuqaleni amapolisa athi acinga ukuba uClark wayexhobile. Kodwa emva kodubulo, amagosa akafumananga sixhobo kuClark, yayingu-iPhone kuphela. Umphathi wamapolisa esixekweni ephendula ngokukhawuleza koluqhanqalazo ngokunika i-bodycam footage kwiinzame zokunceda uluntu, ngaphandle kokuqaphela ukuba kwenzeke ntoni ngenene. Kodwa i-footage ayinakuyisombulula loo nto.
Ukucaphuka ngenxa yezehlo eziphezulu kunye nokutshintsha kwembono yoluntu kukhokelele amasebe amapolisa kwihlabathi liphela ukuxhobisa amagosa amaninzi ngeekhamera kunye nokongeza uqeqesho lokunyusa umgangatho. Kodwa akukho mthetho wasekhaya, wombuso okanye wele-federal owathintele amapolisa ekusebenziseni amandla abulalayo ngokungeyomfuneko. Endaweni yoko, abenzi bomthetho kuwo onke amanqanaba basavumela abaphathi ukuba basebenzise amandla abulalayo abavumayo ngokomgaqo-siseko. Ewe ukuthelekisa namapolisa kubonisa ukuba le mithetho ihamba kude kakhulu ukukhusela amapolisa ngexabiso lokufa kwabantu.
Anon., Nd I-EFF. [Kwi-Intanethi]
Kufumaneka kwi: https://www.eff.org/pages/body-worn-cameras
[Ifunyenwe ngo-Okthobha 18, 2017].
Anon., Sep 23, 2014. Ukunyanzela iZiko lezeNzululwazi. [Kwi-Intanethi]
Kufumaneka kwi: https://www.policeone.com/police-products/body-cameras/articles/10-limitations-of-body-cams-you-need-to-know-for-your-protection-Y0Lhpm3vlPTsJ9OZ/
Is Hardy S, BLRPCSWPP-HS, 2017. Impilo yeNgqondo kuNyango loSapho. [Kwi-Intanethi]
Kufumaneka kwi: http://www.mhfmjournal.com/old/open-access/the-feasibility-of-using-body-worn-cameras-in-an-inpatient-mental-health-setting.pdf
UKetchell, M., Januwari 18, 2016. UKUdibana. [Kwi-Intanethi]
Kufumaneka kwi: http://theconversation.com/u-s-laws-protect-police-while-endangering-civilians-52737
UMDLALO, A., nd FAST CCOMPANY. [Kwi-Intanethi]
Kufumaneka kwi: https://www.fastcompany.com/3062837/it-fell-off-body-camera-problems
Ikhamera eyamkelweyo yomzimba ayinakuba sisigqibo sokugqibela gqibela ukuguqulwa: Disemba 3rd, 2019 by admin
3197 Ubutyebi Bonke Imibukiso ye-13 Namhlanje